एउटा चिकित्सक जोडी, प्रेम र सम्बन्ध - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
एउटा चिकित्सक जोडी, प्रेम र सम्बन्ध
महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पतालका नाक, कान तथा घाँटी विशेषज्ञ डा. कुञ्जन आचार्य तथा तिलगंगा अस्पतालकी आँखा विशेषज्ञ डा. सञ्जिता शर्माले एक–अर्कालाई चिनेको १५ वर्ष बितिसकेको छ भने उनीहरू जीवनसाथी भएको पनि १० वर्ष पुगिसकेको छ । दुवैको घर नजिकजस्तै भए पनि उनीहरूको भेट एमबीबीएसको पढाइका सिलसिलामा नेपालगञ्ज पुगेपछि मात्र भएको हो । सञ्जिता एमबीबीएस पढ्न नेपालगञ्ज पुग्दा कुञ्जन एक वषअर्घिदेखि त्यहाँ पढ्दै थिए । एउटै कम्पाउन्डभित्र रहेको होस्टलमा बस्ने यी दुईको भेट परिचयात्मक कार्यक्रमको सिलसिलामा भएको हो ।
परिचयपछि दुवै नजिकिए । एक वर्ष सिनियर कुञ्जनले सञ्जिताको पढाइमा सघाउन थाले । एक वर्ष सँगै बसेर पढे पनि अर्काे वर्ष सञ्जिता अध्ययनका क्रममा कोहलपुर पुगिन् । त्यतिबेलासम्म उनीहरूबीच आत्मीय सम्बन्ध स्थापित भैसकेको थियो । हरेक दिन एक–अर्कालाई भेटेर घन्टौं कुरा गर्ने यी दुईलाई यसरी टाढा बस्नुपर्दा सजायजस्तै भयो । जुन कुराको अनुभव उनीहरू टाढा भएपछि मात्र भयो । फलत: उनीहरू नभेटी रहन सकेनन् । हप्ताको एकपटक जसरी भए पनि समय मिलाएर भेट्न थाले । सञ्जिता थोत्रो ट्याम्पोमा बसेर कुञ्जनलाई भेट्न कोहलपुरबाट नेपालगञ्ज पुग्थिन् ।
सञ्जितालाई एरेन्ज म्यारिज मन पर्दैनथ्यो । हुन त उनको परिवारमा सबैको एरेन्ज म्यारिज नै भएको हो तर उनी लभ म्यारिज नै गर्ने पक्षमा थिइन् । सञ्जिता पहिलो परिचयात्मक भेटमा नै कुञ्जनप्रति आकर्षित भएकी थिइन् । उनी कुञ्जनको ह्यान्डसम, कुल लुक्स, साधारण देखिने र कम बोल्ने व्यक्तित्वबाट प्रभावित थिइन् । कुञ्जनलाई पनि बोल्ड, नेतृत्व लिन सक्ने खुबीे देखेर सञ्जितासँग विवाह गरे जीवन सुखी हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो ।
सञ्जिता बोलिरहने, सानो कुरामै रमाउने प्रवृत्तिकी थिइन् तर कुञ्जन भने चाहिने कुरा मात्र बोल्ने, काममा बढी फोकस र बढी महत्वाकांक्षा नराख्ने व्यक्ति हुन् । उनीहरूको अनुभवमा दम्पतीबीच फरक प्रकृति, स्वभाव भयो भने सम्बन्ध अझ सहज र सुन्दर हुन्छ । एमबीबीएसपछि विवाहका लागि दुवैले घरमा भनेपछि कुरा चल्यो । मिल्ने जात, दुवै काठमाडौंकै, दुवैले एमबीबीएस सकेका तथा उमेर पनि मिल्ने भएकाले घरपरिवारबाट नकार्ने कुनै ठाउँ थिएन । यद्यपि विवाहअघि दुईजनाको इच्छा र सोच केही समयका लागि खलनायक साबित भयो । सञ्जिताले पहिलेदेखि नै एमबीबीएस सकेर विदेश जाने सपना पालेकी थिइन् भने एक्लो छोरो भएकाले कुञ्जन नेपालमै बस्ने सोचमा थिए । दुवैको अलग सोचले केही समय दुवैलाई मानसिक तनाव भयो तर सञ्जिताले विदेश बस्ने सोच त्याग्दै कुञ्जनलाई आफ्नो बनाउन चाहिन् । आफ्नो यो निर्णयबाट उनी अहिले निकै खुसी छिन् ।
यो चिकित्सक जोडीका ५ वर्षका जुम्ल्याहा छोरा छन् । सन्तान भएपछि दुवैमा जिम्मेवारी बढेको अनुभव छ तर सासू–ससुराको राम्रो सहयोगका कारण उनीहरूको करिअरमा कुनै कष्ट अनुभव भएन । डा. सञ्जिताले छोराहरूको कुनै कुरामा टेन्सन लिनु पर्दैन । छोराहरू साना छँदा बिहान उठेर डाइपर चेन्ज गर्ने, दूध बनाउने, बोतल सफा गर्नेजस्ता सबै काम डा. कुञ्जनले नै गर्थे । अहिले पनि छोराहरूको ब्रसदेखि ख्वाउने, होमवर्क सबै उनकै जिम्मामा छ । छोराहरूको हरेक काममा रमाउने डा. कुञ्जन भान्साको काममा त्यति जानकार छैनन् । त्यसैले भान्साको काम र सरसफाइको जिम्मा सञ्जिताले सम्हालेकी छिन् । दुवै जना भिन्न स्वभावका भए पनि उनीहरूबीच खाना, ड्रेसअप तथा घुम्ने रहर भने मिल्छ तर घुम्न जाँदा कुञ्जन फर्कन हतार गर्छन् भने सञ्जिता रिल्याक्स फिल गर्छिन् । दुवैको ड्युटी बिहान ८ बजेदेखि सुरु हुन्छ । साँझ ७ बजेसम्म प्राय: उनीहरू क्लिनिकमै व्यस्त रहन्छन् ।
यो जोडीले आफ्नो व्यस्त समयबाट शुक्रबार र शनिबार दुई दिन छोरा एवं परिवारका लागि समय मिलाएका छन् । ती दिनमा छोराहरूलाई लिएर सिनेमा हल, भृकुटीमण्डप, बालसंसार, चिडियाखाना आदि पुगिरहन्छन् । समय–समयमा छोराहरू लिएर पोखरा, सौराहा, मनकामना, घ्याम्पे डाँडा आदि ठाउँ गैरहन्छन् । सिनेमाका पारखी डाक्टर कुञ्जन एक्लै पनि हलमा गएर सिनेमा हेर्छन् तर सञ्जिता फुर्सदमा छोराहरू सँगै रमाउँछिन् ।
नाक, कान, घाँटी र आँखा नजिक–नजिकका अंग भएकाले उनीहरू एकले अर्काकहाँ बिरामी रिफर गरेर सहयोग गर्छन् । डा. कुञ्जनले सिंगापुरबाट फेलोसिप गरेका हुन् भने डा. सञ्जिताले भित्री रेटिनामा फेलोसिप गरिरहेकी छिन् । उनले १ वर्ष हेटौंडा सामुदायिक आँखा अस्पतालमा प्रमुखका रूपमा काम गरेकी थिइन् । जुन बेला उनका जुम्ल्याहा छोरा ३ वर्षका मात्र थिए । यसरी एकले–अर्कालाई सहयोग नगरे सम्बन्ध कसरी बलियो हुन्छ भन्दै डा. कुञ्जन भन्छन्–अहिलेको समयमा एक–अर्कालाई सपोर्ट, सम्मान एवं माया गर्नुपर्छ जसका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि पछि पर्नु हुँदैन । यसरी नै जीवन सुन्दर र रमाइलो हुने उनको धारणा छ । नारीबाट सभार